31 Oct, 2014 - 09:10	 2014-10-30T15:28:42+00:00 2014-10-31T09:00:59+00:00 0 Views
Panashe Rusinahama wepaMurembe High School, kwaMusana, kuBindura anoti:
1. Ndinoda kuziva kuti kumusha mupanda upi? (Mupanda 17 (ku- plus noun). Usaukanganise nemupanda 15 (ku- plus verb))
2. Tsumo inoti guyu kutsvuka kunze mukati mune masvosve inorevi? (Chinhu chinotarisika zvakanaka kunze asi mukati hauzive kuti makadii. Munhu anogona kuratidzika seakanaka pachiso asi mumoyo make haumuzive.)
Nyasha Wilmah Pawakwenyewa ari muGrade 7 White paKuwadzana 1 Primary School, muHarare ndokuti:
Chii chinonzi shashiko nemhapa? (Shashiko inhembe yaipfekwa nevanhukadzi kare ichisungirwa muchiuno yorembera nekumberi. Inogonazve kunzi shweka. Mhapa inhembe yaipfekwa kumberi nevarume vakare.)
Malon Makoni uyo ari muGrade 4 paSharara Primary School, kwaRusape akabvunza kuti:
Muzhanje unonzi chii nerimwe zita? (mushuku)
Omega Bote wemuGrade 7 paNyamande Primary School, kuDomboshava ndokuti:
1. Pachivanhu mvura inopihwa tezvara nemuroora inonzi chii? (Vamwe vanoti gate. Hoyoka mubvunzo vaverengi, pindurai Omega.)
2. Ndinokumbirawo kudetemberwa mutupo wangu unonzi Gumbo Madyira Pazhe. Kuti Kwayedza ndiko kuti hupenyuzve. (Ona Peji 2)
CHIDZIDZO CHESVONDO RINO
Unozviziva here kuti pachivanhu chedu munhu anogona kunzi haasi munhu nekuda kwekuti anenge asina hunhu chaihwo hunotarisirwa muvanhu vakarairwa uye vanoziva kugara nevamwe zvakanaka. Kana ukanzwa pachinzi, “Unoti munhu here uya?” kana kuti, “Paye hapana nezvemunhu” zvinenge zvichireva kuti munhu iyeye ane chimiro chemunhu, asi zvaanoita, nezvaanofunga zvichipesana nehunhu hunotarisirwa muvanhu chaivo. Hunhu hwemunhu hunoumbwa nekuziva zvakanaka nezvakaipa mukugarisana kwevanhu.
Mazuva ano, munhu anoshamisira nekuratidza hunhu hwakasiyana nehwevamwe anorumbidzwa achinzi, “akapenga” kana kuti “haaite” asi ikoko kuratidza kuparara kwetsika dzechivanhu.
Zvakawanda svondo rinouya.